Ingabe ikhona indlela ephephile kwesisindo?
Ulahlekelwe isisindo - akunzima. Kunzima ukuba angadli. Ayikho snacking emva eziyisithupha ngosuku lokuzila ukudla kanye ngesonto, ukunciphisa servings nsuku zonke kilojoule 800 ... Uma uke wazama qinisekisa ukuthi ukudla, uyazi ukuthi kunzima kangakanani. Kodwa-ke ngeshwa, ungalahlekelwa isisindo kuphela uma ikhalori ukusetshenziswa idlula sokufika kwabo. Lokhu kungafezwa, noma inani umsebenzi noma ekudleni. Kodwa akubona bonke abantu abanomqondo isikhathi kanye nemizamo ukufezekisa ukusebenza kanzima ejimini. Ukudla kulula futhi ethengekayo, kodwa bafana sokuhlushwa indlala. Futhi lapha ukusiza abakhiqizi zezidakamizwa. Anikeza kalula futhi ngokushesha ukuxazulula inkinga ngokususa isizathu yayo kakhulu - isifiso isidlo esihlwabusayo.
Lokho emakethe oluyohlala?
imithi yesimanje linikeza izinhlobo ezintathu izidakamizwa ukucindezela iphango:
Nezithasiselo, isb izithasiselo eziphila abakhuthele. La mathuluzi ayizwakali, lutho odokotela abazange ababheke njengezinto imithi. Zingase zingabonisi kakhulu ngcono jikelele ngoba ziqukethe ingcosana yamavithamini namaminerali, ezikhishwe ngezindleko zemithi engamakhambi. Kodwa ngeke kusize ukunciphisa umzimba.
Okukushoyo kuyashesha umzimba - ukuthi Positioning abakhiqizi yabo. Eqinisweni, abazi ukusheshisa umzimba. Zonke ukuthi lezi izidakamizwa labo abazokwazi - ngokushesha ukuhoxisa uketshezi emzimbeni futhi kubangele iziyaluyalu emathunjini. Yiqiniso, isisindo kulahleka ngokushesha ngokwanele. Kodwa ngesikhathi esifanayo umchamo okukhipha amavithamini kanye ukulandelela izakhi, okusho ukuthi maduze ngezipikili ziba ziyaqothuka, isikhumba - ezomile futhi okuxekethile, futhi izinwele uzoqala fall out. ekugcineni A eyayenziwe ngamabomu wamathumbu disorder abe "kungokwemvelo" noma ezingamahlalakhona. Kolwelwesi, nesifo futhi dysbacteriosis ezilindele labo izidakamizwa ezinjalo.
izidakamizwa ezinamandla ziholele okusheshayo kwesisindo. Ziyakwazi ngempumelelo, kodwa lunezinto eziningi eziyingozi. Imiphumela lezo zimali ukwenza izinto zokuchitha isizungu ngokudabukisayo iphazamiseke hormone, izinkinga ipheshana wokugaya ukudla, amalunga omzimba, ukushintshashintsha kwemizwelo nokucindezeleka. Ngezinye izikhathi lezi zimali ziyalutha.
A zihlasela kakhulu, ngenxa kokuthola zonke izidakamizwa ukubuyiselwa wt abalwe ngenhla. Phela, umzimba akuyona ukuncipha, ke "ukunciphisa umzimba." Ngakho njengoba nje uyeka ukuphuza umuthi, umzimba uzoqala ukubuyisela lokho ayezithathe ngempoqo.
Unciphise umzimba ngaphandle ingozi
Kodwa zikhona izindlela ezisebenzayo Zinciphisa isifiso ngaphandle ilimaza umzimba. Tsefamadar elihlangabezana nazo zonke izidingo zokuphepha. It ikhiqizwa eJalimane futhi kuleli zwe kuyingozi kakhulu ngale nkinga bese Standardization imikhiqizo eyenza imithi.
Isakhi esiyinhloko "Tsefamadara" - impande akhiphe Calotropis gigantea, futhi ibizwa nangokuthi i "Madar". I-Latin igama simila - Calotropis Gigantea. Sikhula emazweni ashisayo ezifana Sri Lanka, Malaysia, India. I izinto asebenzayo eziqukethwe isitshalo, ezithinta ngqo izikhungo ezinzwa obhekene umuzwa satiety nendlala. Ukuthatha "Tsefamadar", ukuqeda ezimbi zokufuna ukuthola ukudla okuthile okumnandi. Umuzwa ekugcwaleni kuyofika, ngisho noma ingxenye ukudla lincane kakhulu.
Kulokhu, lesi sidakamizwa kunomphumela Ugqozi amathoni ukukhanya. Lokhu kubaluleke kakhulu uma uvivinya umzimba. Phela, indlela yokudla ehambisana nempilo zivame ukuhambisana umuzwa ubuthakathaka, ithoni anda - lokho okudingekayo esimweni esinjalo emzimbeni.
"Tsefamadar" okungenangozi. Lena akuyona laxative futhi isisu, ngakho ngeke kuholele amanzi emzimbeni futhi amavithamini. Lesi sidakamizwa akunamthelela le endocrine kanye izinhlelo sezinzwa, awusebenzi izinkinga pheshana emathunjini. Usanda udle kancane futhi ulahlekelwe isisindo ngokwemvelo. Umzimba isikhathi ukuba sijwayele umbuso omusha, ngakho-ke, isisindo ubudala ngeke babuyele kulo. Tsefamadar ikuvumela ukuba balahle Kilos extra phakade.
I-buzz endlebeni: izimbangela nezindlela zokwelashwa. Ukwelashwa komsindo ezindleleni zezindlebe zabantu